Dhizaini uye Gungano - Mestech Industrial Limited
Chigadzirwa dhizaini uye gungano inoumba kukwana kwakakwana kwechigadzirwa.
Mestech ine timu ine ruzivo uye ine hunyanzvi yemainjiniya, vanogona kukupa dhizaini yemapurasitiki nesimbi yezvinhu zvemagetsi emagetsi, zvishandiso zvemagetsi, zvekurapa zvigadzirwa nezvimwe zvigadzirwa zvinoenderana nezvaunoda, pamwe nekugadzira modhi, kuongorora uye kugadzirisa dhizaini.
Isu tinopa chigadzirwa dhizaini mune zvinotevera zvinhu:
1. Maindasitiri dhizaini yechigadzirwa chitsva.
2. Iyo yakazara dhizaini uye kugona kwekuita kwezvinhu zvemagetsi zvigadzirwa uye zvidiki midziyo yemumba.
3.Dhisheni dhizaini yezvipurasitiki zvikamu uye Hardware zvikamu.
4. Mutengi achapa iyo yekutanga data uye yakatarwa zvinodiwa pakuonekwa uye saizi dhizaini, uye nekupa 3D kana 2D dhizaini yezvinhu zvePCBA, majoini uye zvimwe zvikamu zvinoenderana nechitarisiko chechigadzirwa uye saizi.
5. Gadzira prototypes inoreva madhizaini ekugadzira, uye ongorora dhizaini uye gadzirisa dhizaini. Uye uratidze kumutengi kuti asimbiswe.
Vashandi vari kuunganidza zvigadzirwa
Yemagetsi chigadzirwa dhizaini
Silicone chigadzirwa dhizaini
Kufa kukanda chikamu dhizaini
Mestech yakagadzira yakakwana kugadzirwa sisitimu uye yekupa cheni. Kunze kwechigadzirwa chitsva dhizaini, isu tinokwanisa kupa vatengi kune imwechete-yekumisa masevhisi anosanganisira ekugadzira chakuvhuvhu, kugadzirwa kwezvikamu uye kutenga, chigadzirwa chechigadzirwa, kuyedza, kurongedza uye kutakura zvinhu
1.Purasitiki chakuvhuvhu manfacturing uye zvikamu jekiseni kuumbwa, silika skrini yekudhinda, electroplating
2. Simbi simbi kugadzira
3. Kutenga zvinhu zvekurongedza nezvimwe zvekuwedzera
4. Chigadzirwa gungano uye kuyedza.
5. Chigadzirwa kuputira uye kutumira.
Kana iwe uine yakanaka chigadzirwa pfungwa uye mutengi boka, isu tinofara kukupa iwe akateedzana emasevhisi kubva kune chigadzirwa dhizaini kusvika apedza chigadzirwa kugadzira.